Waxqabadka Dowladda ee Usbuucii la soo dhaafay | BARMUUDO.COM
Saturday, November 29th, 2014 | Posted by webmaster | 1 views
Mogadishu, 29 November 2014 – Wasiirka Warfaafinta Mudane Mustafa Sheikh Ali Dhuxulow ayaa ka warbixiyey horumarka Dowladda ee usbuucii la soo dhaafay. Wasiirka ayaa ka hadlay arrimo ay ka mid yihiin; Xoojinta Doorka Dumarka, Dib u habeynta Gaadiidka ka howlgala Dekedda, Qaadista jid-gooyooyinka sharci darada ah, Horumarka Dhalinyarada Soomaaliyeed, dayactirka waddooyinka Muqdisho iyo Shabeelaha Dhexe, xoojinta wadashaqeynta AMISOM iyo QM, doorka warbaahinta ee ka hortagga xagjirnimada, wacyigelinta dhaqanka Soomaaliya, iyo horumarka qorshaha xasilinta Dalka.
Midowga Afrika oo xoojineysa doorka dumarka
Wasiirka Warfaafinta oo hadalkiisa ku bilaabay Xoojinta doorka Dumarka ayaa yiri “Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan arrimaha Dumarka, Nabadda iyo Amniga Ms. Bineta Diop ayaa Muqdisho soo gaartay 25kii November oo ay 4 maalmood oo booqasho rasmi ah ay ku timid oo ay ugu kuurgaleysay xaalada dumarka, arrimaha nabadda iyo amniga ee Soomaaliya. Booqashadeeda ayaa waxey calaamad weyn u tahay sida ay Midowga Afrika uga go’antahay sidii loo xoojin lahaa amniga, nabadeynta iyo doorka dumarka ee dhanka horumarka. Mudadii ay joogtay waxey kulamo la qaadatay madaxda Qaranka, Wasiirada qaarkood, ururada bulshada rayida iyo dumarka Soomaaliyeed, iyadoo dooneysay inay fahamto xaalada dhabta ah ee Soomaaliya, gaar ahaan doorka dumarka, rabitaankooda iyo horumarka ay ku tallaabsadeen. Arrimaha xooga lagu saaray booqashadan ayaa aheyd sidii Midowga Afrika ay u xoojin lahaayeen inay kaalin ka geystaan doorka dumarka iyo sidii dumarka ay uga qeybqaadan lahaayeen arrimaha siyaasadda, nabadeynta iyo horumarka dalka. Waxeyna hoosta ka xariiqda sida aan loogu dulqaadan karin in dumarka loo geysto tacadiyo, iyadoo ay jireen eedeymo loo soo jeediyey ciidanka AMISOM. Wasiirka Gaashaandhiga, Mudane Mohamed Sheikh Hassan ayey Muqdisho kula wada hadleen warbaahinta una sheegeen inay ka go’antahay sidii loo tayeyn lahaa ciidanka Soomaaliyeed si ay amniga dalka u sugaan.”
Dib u Habeynta Gaadiidka ka howlgala Dekedda
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey dib u habeynta gaadiidka ka howlgala Dekedda Muqdisho ayaa yiri “Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada ayaa 25kii November 2014 Muqdisho kulan kula yeeshey guddi ka socday iskaashatada iyo shirkadaha gaadiidka kaasi oo ku saabsanaa sidii dib u habayn loogu sameyn lahaa gaadiidka xamuulka ee ka howlgalla dekedda Muqdisho. Mudane Saciid Jaamac Cali Qoorsheel ayaa warbixinno ka dhageystay guddiga Iskaashatada iyo shirkadaha gaadiidka, kuwaasi oo ku saabsanaa cabashooyin ku aadan howlgalka Gaadiidka Xamuulka ee Dekedda Muqdisho. Wasiirka Gaadiidka iyo Duulista Hawada Mudane Saciid Qoorsheel ayaa tilmaamay in Hadafka uu yahay in baabuurta ay u sinaadaan howlaha dekadda, isla markaana aysan jirin cid si gooni ah dekadda uga shaqeysan karta, in baabuurta ay noqoto baabuur shaqeyn karta, waxaana la isla meel dhigay sidii dib u habayn loogu sameyn lahaa nidaamka ay uga dhex shaqeysanayaan gaadiidka Dekadda Muqdisho.”
Qaadista Jid-gooyooyinka Sharci Darada ah
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey jid-gooyooyin sharci daro ah oo laga qaaday waddooyinka ayaa yiri “Magaalada Wanlaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa 25kii November 2014 looga hadlay sidii loo sii xoojin lahaa qaadistii jid-gooyooyinka sharci darada ah ee inta u dhaxeysa Afgooye iyo Wanlaweyn oo ciidamada Dowladda ay beryahanba wadeen dadaal tallaabo looga qaadayo dadka caadeystay inay lacago sharci darro ah ay ka qaadaan dadka iyo gaadiidka isticmaala wadada. Kulanka ayaa waxaa ka qeybgalay qeybaha kala duwan ee bulshada, masuuliyiinta Gobolka iyo saraaskiisha ciidamada dowladda. Arrimaha laga hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa sidii loo xaqiijin lahaa ammaanka waddada oo dhawaan ay ciidamada dowladdu ka ceyriyeen maleeshiyaad dadka ku dhibaateyn jiray. Ugu danbeyntii waxaa la isla gartay in guddi gaar ah loo saaro kormeerka waddada isku xirta Afgooye iyo Wanlaweyn, kaas oo la shaqeyn doona ciidamada XDS.”
Horumarka Dhalinyarada Soomaaliyeed
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey horumarka dhalinyarada ayaa yiri “25kii November ayaa magaalada Marka ee xarunta Gobolka Shabeellaha Hoose waxaa ka dhacay dood cilmiyeed ay isugu yimaadeen dhallinyaro ka kala socotay magaalooyinka Muqdisho, Marka iyo Baraawe, kaasi oo looga hadlayay sidii loo sameyn lahaa dallad isku xirta dhallinyarada Soomaaliyeed. Dood cilmiyeedkan oo ay soo qabanqaabisay Hay’adda wadahadalka CCD, waxaa ka soo qeyb galay in ka badan boqol dhallinyaro oo ka kala socota gobolada Banaadir iyo Sh/hoose, madax ka tirsan maamulka Marka iyo Baraawe, waxayna ka hadleen muhiimadda ay u leedahay in dhallinyaraada Soomaaliyeed loo sameeyo dallad isku xirta si ay horumarka iyo nabadda dalka uga qeyb qaataan. Taliye K/Xigeenka Booliska magaalada Marka Cusmaan Sheekh Cali ayaa sheegay in dood cilmiyeedkaan uu yahay mid muhiim weyn u leh dhallinyarada, isagoona sheegay in dhallinyarada ay ku gaari karaan yoolkooda. Guddoomiyeyaasha dhallinyarada Marka, Barawe iyo Banadir ayaa dood cilmiyeedkan ku tilmaamay mid ay dhalinyarada uga tashanayaan aayahooda, doonayaana inay wadashqeyn fiican yeeshaan oo ay ku midoobaan dalad u dooda xuquuqdooda.”
Dayactirka Waddooyinka Shabeelaha Dhexe & Muqdisho
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey dayactir lagu sameeyey waddooyinka Jowhar iyo Muqdisho ayaa yiri “Dowladda Federaalka waxey ahmiyad gaar ah siineysaa dayactirka waddooyinka si ay shacabka ugu sahlanaato isu socodka, isla markaasna loo xoojiyo horumarka ganacsatada. Degmooyinka Jowhar iyo Warta Nabadda ayaa waxaa si xowli ah uga socda Dayactir ballaaran. 25kii November 2014 ayaa Jowhar laga bilaabay dayactirka buundada Jowhar. Wadada laamiga ah ee Buundada Jowhar ayaa waxaa ka socda dayactir ballaaran. Buundada Jowhar oo kala qeybisa xaafadaha Hantiwadaag iyo Horseed ayaa waxay udub dhexaad u tahay isu socodka wadada dhinaca waqooyi bari iyo koofur galbeed magaalada. Dhanka kale degmada Warta Nabadda ayaa laga bilaabay dayactir ballaaran oo waddooyinkii ay roobabka waxyeelada u geysteen lagu dayactirayo.”
Wadashaqeynta AMISOM iyo QM oo la sii xoojinayo
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey xoojinta wadashaqeynta AMISOM iyo QM ayaa yiri “AMISOM iyo Qaramada Midoobay Xafiiskiisa Isku xirka (OCHA) ayaa 25kii November 2014 waxey ku dhawaaqeen Tilmaamo gaar ah oo lagu maamulayo wadashaqeynta iyo xiriirka AMISOM iyo QM si ay u sahlanaato in gar-gaarka bani’aadanimo si dhaqsi leh loo gaarsiiyo dadka ay dhibaatadu heysato. Xafladdan ayaa waxaa joogay Ergeyga Gaarka ah ee Midowga Afrika ee Soomaaliya ahna Madaxa AMISOM Ambassador Maman S. Sidikou iyo Ku xigeenka Ergeyga Gaarka ah ee Xoghayaha Guud ee QM una qaabilsan dhanka isku xirka iyo gar-gaarka bani’aadanimo Mr. Philippe Lazzarini. Tilmaamahan gaarka ah ayaa ujeedkiisu yahay sidii loo xoojin lahaa wadashaqeynta iyo isku-xirka labada hay’adood. Madaxa AMISOM ayaa xaqiijiyey sida ay AMISOM uga go’antahay sidii shacabka Soomaaliyeed loo gaarsiin lahaa gar-gaar bani’aadanimo. Heshiiskan ayaa la aaminsanyahay inuu xoojinayo wadashaqeynta, is-faham iyo sidii sida ugu dhaqsiyaha badan gar-gaarka loo gaarsiin lahaa shacabka Soomaaliyeed.”
Doorka Warbaahinta ee ka hortagga Xagjirka
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey doorka warbaahinta ee ka hortaga Xagjirnimada ayaa yiri “Bahda warbaahinta ayaa 23kii November 2014 yeeshay kulan dood iyo wadatashi ah ee ku aadan doorka warbaahinta ee ka hortagga in dhalinyarada ay noqdaan xagjir. Kulankan oo ay ka soo qeybgaleen 40 bahda warbaahinta iyo bulshada rayidka ah iyo xubno ka socday dowladda, ayaa diirada lagu saaray sidii warbaahinta ay kaalin muuqda uga qaadan laheyd in dhalinyarada aysan ku biirin kooxaha argagaxisada. Barnaamijkan ayaa waxaa soo wada qaban qaabiyey Ururka Suxufiyiinta Qaranka Soomaaliyeed (NUSOJ) iyo SIMHA, iyadoo Xarunta Wacyigelinta Bulshada (CCA) ay taageertay barnaamijka. Wasiirka Warfaafinta, Mudane Mustafa Sheikh Cali Dhuxulow oo furay kulanka ayaa hoosta ka xariiqay muhiimadda kulanka kuna tilmaamay in warbaahinta ay door weyn ka qaadato wacyigelinta bulshada siiba dhalinyarada in laga reebo inay ku biiraan kooxaha xagjirka ah. Wasiirka ayaa sheegay in Dowladdu ay ku dadaaleyso sidii dhalinta shaqo loogu abuuri lahaa bacdamaa shaqo la’aanta ay keeneyso inay ku biiraan kooxaha argagaxisada ah. Xogahayaha Guuud ee NUSOJ, Maxamed Ibrahim iyo Guddoomiyaha CCA, Maxamed Cajiib ayaa ku nuuxnuuxsaday in si deg deg ah loogu baahan yahay in warbaahinta ay istraatejiyad cad-cad ka yeeshaan sidii dhalinta Soomaaliyeed looga wacyigelin lahaa qatarta xagjirnimada, isla markaasna loogu abuuri lahaa barnaamijyo wacyigelineed oo muhiim u ah nabadeynta dalka.”
Wacyigelinta Bulshada iyo dhiirigelinta Dhaqanka
Wasiirka Warfaafinta oo ka hadlayey Wacyigelinta iyo dhiirigelinta dhaqanka ayaa yiri “26kii November 2014 ayaa Muqdisho lagu soo bandhigay wacyigelin iyo dhiirigelin ku aadan dhaqanka Soomaaliyeed. Xafladan oo habeen lagu qabtay Muqdisho ayaa waxaa soo qabanqaabiyey Hay’ada Wacyigelinta Bulshada (CCA). Waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka qeybgalo xafladan muhiimka u ah dhaqanka. Munaasabadan ayaa lagu muujinayay ahmiyadda uu ummadda u leeyahay dhaqanka iyo hiddahooda, iyo sida loogu baahanyahay in dhalinyarada lagu wacyigeliyo weyneeynta dhaqanka iyo hiddaha ay dhaxalka u leeyihiin. Xafladdaas oo loogu magacdaray habeenka dhaqanka Soomaaliya ayaa lagu soo bandhigay qaar ka mid ah ciyaaraha hiddaha iyo dhaqanka ee laga ciyaaro gobollada dalkeenna. Ujeedada xafladaasi ayaa aheyd sidii dhalinyarada loogu wacyigelin lahaa sare u qaadida dhaqanka iyo hiddaha suuban ee Soomaaliya. Waxaan ku dhiiri geliyey dhalinyarada inay bartaan dhaqankooda iyo hiddaha si ay ugu faanaan isla markaasna ay uga celiso falalka xagjirnimada iyo argagaxisada.“
Horumarka Qorshaha Xasilinta Dalka
Wasiirka Warfaafinta oo ugu danbeyntii ka hadlay horumarka Xailinta Dalka ayaa yiri “Dowladda Federaalka ayaa in mudo ahba waday Barnaamijka Xasilinta Dalka oo si xowli u socda. Magaalada Muqdisho ayaa lagu soo qabqabtay maliishiyaad ka tirsan Al-Shabaab iyo hub ay la damacsanaayeen inay waxyeelo u geystaan shacabka. Dhanka kale Taliska qeybta 60-aad ee ciidanka XDS ayaa howlgallo ay ka sameeyeen deegaanno ka tirsan gobollada Baay, Bakool iyo Gedo ay ku soo qabqabteen maleeshiyaadka Al-Shabaab. Gen. Ibraahin Yarow oo ah taliyaha qeybta 60-aad ee ciidanka XDS ayaa sheegay in howlgallada ay kusoo qab qabteen tiro maleeshiyaad ah oo jid gooyooyin u taalay waddooyinka. Howlgaladan ayaa ah kuwo si joogta ah horumar looga sameynayo tanoo sii xoojineysa amniga iyo nabada ka hirgashay dalka. Wuxuu tilmaamay Gen. Ibraahin Yaroow iney wada shaqeeyn iyo taageero buuxda ay ka heleen shacabka, taasina ay u fududeeysay iney ku guuleeystaan howlgallada ay ka wadaan gobolladaasi.”
Short URL: http://barmuudo.com/?p=5980